तीन राष्ट्रिय पुरस्कार जित्ने फिल्म, हेर्नुहोस् युट्युबमा :: प्रभाकर गौतम :: Setopati
तीन राष्ट्रिय पुरस्कार जित्ने फिल्म, हेर्नुहोस् युट्युबमा
गुड फ्राइडे सिनेमा
समुद्रको छालले जिस्क्याउँदै छोएर भाग्ने 'उस्ताद होटल' मा जो आउँछ, पेटसँगै मन पनि तृप्त पारेर जान्छ। किनकी यहाँका साहुजी करिम चाचाले खानामा प्रेम मिसाउँछन्।
करिम चाचाका छोरा अब्दुल रजाकको पेट र मन प्रेमले भरिँदैन। उनी सानो होटल चलाउने बुबाका छोराको परिचय बोक्न चाहँदैनन्।
छोराको भविष्यसँग जोडिएका उनका आफ्नै सपना हुन्छन्। रजाकले आफ्नी श्रीमतीले पहिलो पटक गर्भवती भएको खबर सुनाएदेखि छोराको भविष्यको सपना देख्न थालेका हुन्। 'उस्ताद होटल' फिल्मको आरम्भ यही प्रसंगबाट हुन्छ।
बुबा बन्ने खबर सुनेपछि रजाकले श्रीमतीले छोरा जन्माउने र छोराको नाम फैजल (फैजी) राख्ने सोचेका हुन्छन्। तर उनको चाहना विपरीत छोरी जन्मन्छिन्। छोरी जन्मिँदा नाक खुम्चाएका रजाकको निराशा अर्को पटक थप बढ्छ जब श्रीमतीबाट फेरि छोरीकै जन्म हुन्छ। यसपछि पनि उनकी श्रीमतीले थप दुई छोरी जन्माएपछि रजाकको धैर्य शक्ति कमजोर हुन्छ। उनी केरलाबाट दुबई जान्छन्।
दुबई जाने बेला उनकी श्रीमतीको कोखमा अर्को बच्चा हुर्किरहेको हुन्छ। छोरा जन्माउने सपना निराशामा बदलिइसकेकाले उनी कुर्दैनन्।
यस पटक भने उनकी श्रीमतीले छोरा जन्माउँछिन्। छोरा त जन्मिन्छ तर लगातार बच्चा जन्माउँदाको सास्तीले उनकी श्रीमतीको स्वास्थ्य कमजोर हुन्छ। उनी तंग्रिन सक्दिनन् र प्राण त्याग्छिन्।
श्रीमतीको मृत्युपछि रजाक आफ्ना साना छोराछोरी दुबई लिएर जान्छन्। फैजी आफ्ना चार दिदीबहिनीसँग खेल्दै हुर्कन्छन्।
दिदीबहिनीले फैजीलाई उनकी आमाले भान्सामा पकाउने जस्तैगरी मिठो खानेकुरा बनाएर खुवाउँछन्। हुर्किँदै जाँदा फैजी आफैं पनि भान्साको काममा रमाउन थाल्छन्। तर उनका बुबा अब्दुल फैजीलाई भान्सामा देख्न मन पराउँदैनन्। फैजीलाई पढ्न मात्र दबाब दिन्छन्।
कथा यहाँसम्म आइपुग्दा मुस्लिम परिवारमा जन्मेका फैजी र उनका दिदीबहिनीप्रति बुबा रजाकले राख्ने विभेदकारी दृष्टिकोण स्थापित भइसक्छ। अर्कोतिर फैजीले आफ्नो चाहना अनुरूप जीवन बाँच्न बुबासँग विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
फिल्ममा फैजीले बुबासँग विद्रोह त गर्छन् तर उनलाई हिरो बनाइएको छैन। फैजीलाई सामान्य रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैले रजाकसँग मतभेद भएपछि फैजी हजुरबुबा करिम चाचाकहाँ पुग्छन्, उस्ताद होटल।
करिम चाचाको बिरयानी सारा सहरमा लोकप्रिय हुन्छ। उनले चाहे मनग्य पैसा कमाउने आधार हुन्छ। तर करिम चाचा व्यवसायी कम र समाजसेवी बढी हुन्छन्। आफू ऋण बोकेर पनि अरूका लागि सहयोग गर्ने स्वभावका हुन्छन्। उस्ताद हाेटल पुगेर सेफ बन्न चाहेका फैजीले होटलको काम त सिक्छन् नै जीवनलाई हेर्ने दृष्टि पनि पाउँछन्।
विदेश गएर राम्रो ठाउँमा सेफ बन्ने चाहना राखेका फैजीका लागि करिम चाचाको शैली र सोचले कस्तो प्रभाव पार्ला? यही नै फिल्मको मूल कथा हो।
मनोरञ्जन र सन्देश बोकेको उस्ताद होटलमा हजुरबुबा, बुबा र छोराबीचको पुस्तान्तर मज्जाले महसुस हुन्छ। फिल्ममा करिब चाचाले हामीलाई खाना कस्तो हुनुपर्छ भनेर मात्र सिकाउँदैनन्, खाना के र कसका लागि भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि दिन्छन्। यहाँ खाना जीवनको प्रतीक बनेर आएको छ। फिल्मले जीवन नै किन र केका लागि भन्ने प्रश्नको जवाफबारे केही प्रश्नहरू पनि छाडेर जान्छ।
फिल्मले दर्शकलाई हसाउँदै रमाइलो शैलीमा महिला र पुरुषबीचको विभेददेखि धनी र गरिबबीचको ठूलो अन्तरको कथा पनि भन्छ। जीवनलाई आफ्नै छनोट र स्वादमा ढाल्न प्रेरित गर्ने यो फिल्मको सुरूआत जति हास्यमय छ भने फिल्मको अन्ततिर उत्तिकै गम्भीर पनि छ।
सन् २०१२ मा सार्वजनिक भएको उस्ताद होटल मलयालम भाषामा बनेको फिल्म हो। अनवर रशिदले निर्देशन गरेको फिल्मको कथा अञ्जली मेननले लेखेकी हुन्।
फिल्ममा दुलारे सलमान फैजल, थिलकन करिम चाचा र निथ्या मेननले सहानाको भूमिका निर्वाह गरेका छन्। सबै कलाकारको अभिनय सहज भए पनि फिल्ममा करिब चाचा बनेका थिलकनले मन जित्छन्।
लोगानाथन श्रीनिवासनको सिनेमाटोग्राफीले सहर, समुद्र र संवेदनालाई कुशल उतारेको छ। फिल्ममा होटल र खानेकुरा पनि पात्रकै रूपमा आइराख्ने भएकाले तिनको कलात्मक चित्रणमा विशेष मेहनत गरिएको छ।
उस्ताद होटलले तीन विधामा राष्ट्रिय पुरस्कार समेत जितेको थियो। बेस्ट पपुलर अवार्ड र उत्कृष्ट संवादसँगै अभिनेता थिलकनलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। थिलकनले यो पुरस्कार मृत्युपर्यन्त पाएका थिए।
उस्ताद होटल जुन महिनामा सार्वजनिक भएको थियो भने करिब तीन महिनापछि उनको निधन भएको थियो।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २५, २०७८, ०९:३२:००
'दिनदिनै पैसा टिपिरहेजस्तो लाग्छ'
राप्रपाका ‘हस्ती’लाई साथ लिएर बनाए कमल थापाले प्यानल
दिवंगत पितृका नाममा दीपदान गर्न पशुपतिमा जाग्राम बसेका भक्तजनहरू (तस्बिरहरू)
हङकङसहित नौ मुलुकबाट आउने यात्रुलाई नेपाल प्रवेशमा रोक
कांग्रेस गण्डकी सभापतिमा शर्मालाई उठाउँदै पौडेलले भने- मुटु गाँठो पारेर मानिदिनुपर्‍यो
तीन दिनको विवादपछि राप्रपा महाधिवेशनमा ४ हजार ४७१ मतदाताको टुंगो लाग्यो
चोक-चोकमा ठूला माछा र साना माछाको द्वन्द्व
अब विमानस्थलमा यात्रुले निःशुल्क बस चढ्न पाउने (भिडिओ स्टोरी)
भुटानी शरणार्थीको कथामा 'रबर सिटी' बनाउँदै निर्देशक विनोद पौडेल
वेब सिरिज छायांकनका लागि यी चर्चित भारतीय कलाकार नेपाल आउँदै
जातीय विभेदविरुद्ध लघु फिल्म प्रतियोगिता हुने, उत्कृष्ट फिल्मलाई दुई लाख
र्‍यापर साकारले गरे 'वर्ल्ड टुर' को घोषणा
कौशी थिएटरमा ‘एनिमल फार्म’ (तस्बिरहरू)
भारतले पहिलो पटक विश्वकप जितेको कथामा आधारित सिनेमा ‘८३’को ट्रेलर सार्वजनिक
'तपाईंको पूर्खाको भाषा कुन हो?' निनाम कुलुङ 'मंगले'
लोक सेवा तिमीले न्याय दिनैपर्छ! सागर पौडेल
तपाईं कसरी नेता? आदित्य दाहाल
तिमीमा धेरै तागत रहेछ प्रिय! गणेश सुवेदी
तिमी आउनू अनि... मदन चालिसे
टुटेका पातहरू! हिकमत सिंह ऐर